Nentembelo Uncumo namazinyo White | Ndlela Best mhlophe Amazinyo Guide
Abantu abaninzi elide kuba amazinyo azo amhlophe. Kukho iindidi zezenzo onokuyenza ukuqinisekisa amazinyo akho akayi tyheli. Kukho iindlela kwakhona ukuba mhlophe amazinyo akho amhlophe. Eli nqaku ineengcebiso ezahlukeneyo bokufumana nina amazinyo amhlophe kwaye ugcine mhlophe.
Qinisekisa amazinyo zakho lwenzisisiswe icocwe phambi kokusebenzisa ziwenza ekhaya kwamazinyo kwirejimeni. Amazinyo ezingwevu iimveliso ziya kuba kakuhle kakhulu xa isicelo nabo acoceke teeth.If amazinyo akho eziziinqambi xa mhlophe phambi ihlamba ngoko iziphumo ziya kuba mnyama ezimagqagala.
Wonke umntu uyazi ukuba iiorenji, orenji okanye lemons, abazizityebi ivithamin C, kodwa uyazi ukuba angakwenza amhlophe mazinyo? Unga sebenzisa amaxolo lemon okanye orange, konke omawukwenze Hlikihla kumphezulu amazinyo akho inxalenye ngasemva, leyo ebangela ukuba kuqaqambile. Ngokubeka kancinci ityuwa phezu Ixolo le lemon okanye orange, isiphumo ukuba kuphuculwa.
Into yokuqala ebalulekileyo xa uzama ukugcina amazinyo akho emhlophe cleanings zobungcali. Fumana amazinyo akho zicocwe rhoqo emva kweenyanga ezintandathu kwaye usoloko ukucwangcisa ukuqeshwa ikamva lakho xa wena xa kucocwa zakho zangoku.
Ezi mveliso ala machiza ukuba angcolise amazinyo akho. uburhabaxa ibrashi yeyona nto yenza ukuba amazinyo akho zicocekile.
Ukuba yesoda ukusela, iti, yekofu okanye iwayini mnyama, undirhabulise amanzi kwakunye. Ezi iziselo imnyama ndasidyobha amazinyo akho, ingakumbi xa uwagqibe rhoqo. Esishwahlazayo iintw amanzi ngeenxa emlonyeni wakho phakathi iintw ezi ziselo kunokusinceda ukuphelisa nayiphi na intsalela enokukhokelela nizikhwebule. Emva odlayo ezi ziselo, khumbula uhlamba amazinyo akho ngokukhawuleza.
Indlela kangako ukuba amazinyo akho whitest yabo ukusebenzisa iziqhamo ezithile. A imizekelo embalwa zeziqhamo ezigqwesileyo ukuba unako ukuzenza mhlophe abamazinyo orenji kunye ne orenji. Kananjalo Qaba Ixolo orange ngokuchasene kumphezulu amazinyo akho ukuba mhlophe.
Thwalani ibrashi elincinane ukuba ungasebenzisa emva kokutya iswekile. Ezi zinto ukutya unamathele amazinyo akho lula, kwaye uqale inkqubo nizikhwebule okanye ongeze kuwo. Emva ukuphatha wena ku elithozamisayo, kuthatha kwimizuzu embalwa ukuxukuxa. Intlama ayifuneki ukuba ukhuhle amazinyo akho uze uzifake kakuhle.
izithsaba soze mhlophe njengabanye yamazinyo. izithsaba bakho baya kuhlala ngokufanayo amazinyo bakho mhlophe. Oku kwenza izithsaba ahlukile ngaphezu ngaphambi kokuba.
Kufuneka ukuthintela buildup ilitye kuba kunokubangela amazinyo akho ukuba ezinombala.
Gcina ibhrashi zinokugcinwa kude xa wena utye ilekese okanye ezinye iilekese. Kuba oku kutya unamathele amazinyo ngokulula kakhulu, zingawakhuthaza nizikhwebule. Emva ukunandipha iilekese, uhlamba imizuzu emibini okanye emithathu. Awunayo ukuba intlama, ukuba nje ukhuhle amazinyo kakuhle nesephu engenakumbi ngamanzi.
ioli ikhokhonathi Organic zingasetyenziswa njenge arhente ziwenza olukhulu teeth.If yakho usebenzisa ioli ikhokhonathi njenge acoce, oko unako ukuzenza mhlophe amazinyo akho malunga 10 imizuzu ngosuku. emva malunga 10 imizuzu, ukupulisha umlomo wakho uze uqabe njengoko ngokuqhelekileyo. Unakho ukubona ezinye iziphumo kwiintsuku ezingaphantsi kwe ezimbalwa.
Ihlamba amazinyo qho emva kokutya kuya kukunceda ukuba lwabakhulula discoloring. Oku kubalulekile xa sele ukusela ikofu.
Yioli Yikhokhonathi organic kungaba itikiti ukuba ezingwevu amazinyo akho. Ukunika amazinyo akho umzuzu-10 qala mihla oli lwekhokhonathi unokuba iziphumo olukhulu obunje uncumo lwakho. emva 10 imizuzu zidlule, ukupulisha umlomo wakho uze ucoce amazinyo akho afana eqhelekileyo. Kufuneka ubone ezinye iziphumo emva kweentsuku ezimbalwa.
ugqirha wakho kukuxelela ukuba yeyiphi amazinyo ekhaya ilungileyo ngaphandle kokonakalisa ulandelise okanye iintsini.
Hlamba amazinyo akho rhoqo ukuba unalo ngoncumo olukhulu. Ukutya kunye nezinye izinto ngakhela amazinyo akho angcolise kubo. Akuyi kufuneka ukuba ukhathazeke izinyo gqwanci ukuba ukuhlamba rhoqo amazinyo akho.
Amanzi sisixhobo ebalulekileyo ekulweni amabala. Kuyanceda ukuba zombini yipura amazinyo akho kwakunye ukunqanda nizikhwebule. Ku sisenzo sempilweni ukugcina ukusebenzisa kwakho amanzi ngosuku ngalunye, ingakumbi emva kwesidlo ngasinye.
Ukugcina obunje amazinyo akho, ukuya wamazinyo rhoqo esicocekileyo up yokukhangela kufuneka. Ukuba rhoqo yindlela omkhulu ukugcina amazinyo akho amhlophe. Umvelele ugqirha wakho ubuncinane qho ezintandathu kweenyanga.
Ukusebenzisa intlama ezingwevu le ndlela ilula ukufumana ezo ePearly amazinyo amhlophe ukuba baye befuna. kukukhuhlana, le intlama esuse zobulongwe kunye nelitye. Ixesha elidlulele, uya kuba amazinyo chapha njengoko amabala iqale ukunyamalala.
Iperoksayidi yehidrojeni kufuneka unyango ekhuselekileyo ezingwevu amazinyo. Akukhuselekanga kwaye kunokubangela amazinyo akho ezinombala; ukuze kwakhona uzakuphela amazinyo amabini anemibala eyahlukeneyo. Ziphephe nayiphi na imveliso ukuba unalo iperoksayidi yehidrojeni.
Ulandelise kukho umaleko lwezakhamzimba iiminerali inwebu zokhuselo ukuba inceda ukuthintela ukosuleleka ingcambu kwakunye nezinye izinto enokonakalisa amazinyo. Ezinye iimveliso izinyo ezingwevu kunganeziphumo kuchaphazela obunje amazinyo akho.
Ukuba ukuxukuxa nokuvungula amazinyo akho kabini ngemini, mhlawumbi uya kuba amazinyo amhlophe kuthelekiswa nezo musani ukwenza oku kudla. Ukusebenzisa ezi ndlela kuzakususa buildup neplaque leyo discolors amazinyo akho. Yinto Yingcamango elungileyo uhlamba amazinyo akho kwaye nokuvungula emva kwesidlo ngasinye.
Kuya kufuneka ukunciphisa ikofu lwakho ukufumana smile.As mhlophe nzima njengoko oku kuba abantu abaninzi, Ikofu ngoyena nobangela amazinyo ezinombala ndasidyobha. Zama ukusela itshokolethi eshushu endaweni ikofu.
The sitrasi yelamuni kunye juice ikalika unako ukuzenza mhlophe amazinyo akho ngempumelelo kukho nabafazi tale endala. Yingcamango elungileyo ukuhlala kude ngokupheleleyo kule ndlela zonyango.
Kufuneka wazi ukuba nasiphi na isisombululo ziwenza isebenza kuphela amazinyo endalo. Nayiphi imiphezulu eyenziweyo, kuquka izithsaba, nimanyane, ngenyewe kwaye ezifana akayi kutshintshwa ngombala. Ukusebenzisa whiteners amazinyo kunokubangela umsebenzi wamazinyo, ezifana izithsaba, ukuma nxamnye amazinyo endalo amhlophe.
Uya kuba amazinyo bephilile mhlophe kwi yesiqhelo esisiseko ukucoca rhoqo yamazinyo kunye nokuvungula. Iimveliso eziqulathe nesoda yokubhaka kakuhle ukususa amabala njengoko nokuvungula nokuvungula.
iiorenji unokuba kakhulu acid ngenxa teeth.You wakho kufuneka ukuphepha incindi iiorenji kwakunye. Iiasidi eziqulathwe sisothuso ngenxa amazinyo akho. Ufuna kwakhona ukuphepha ukutya oku kutya phambi Wowuncamela ebusuku, ngokuba ndikwenze kusenokwenzeka ukuba ubunzima ukusuka reflux acid, leyo kalisa amazinyo akho.
Ukuba unomdla ezingwevu amazinyo akho, thetha wamazinyo wakho kuqala. Ezingwevu ukuba amazinyo ayikho sisibhambathiso elula izithambiso. Yiya bamazinyo yakho rhoqo ukuqinisekisa ukuba amazinyo akho esempilweni. Qiniseka ukuba uthetha wamazinyo malunga irejimeni amazinyo ezingwevu.
Yenza ngumgubo ngokuthi besila ndawonye amaxolo-orenji kunye namagqabi bay. Le ngumgubo linokusetyenziswa ibhrashi yakho novakalelo.
Musa mhlophe amazinyo akho ukuba imiba engekasonjululwa zamazinyo ezifana cavities.Make qiniseka ukuba uhlangane ne wamazinyo bakho phambi kokuba uqale home ezingwevu iinkqubo ezifanelekileyo kuwe.
Musani ukukholosa toothpastes ezithi baza kukunika amhlophe mazinyo. Abaninzi kuphela mhlophe kancinci amazinyo akho, ukuba konke, kodwa ungasebenzisa nezinye iimveliso ukuba ufuna amazinyo amhlophe. Ukuba wenza ukuthenga intlama ezingwevu, kuthenga enye equlathe nesoda yokubhaka, njengokuba kunjalo kunokusinceda.
Njengoko kuchaziwe ngaphambili, kukho abantu abaninzi bafuna ukuba amazinyo amhlophe. iindlela ezininzi ezahlukeneyo nenokusetyenziswa ngenxa ezingwevu amazinyo akho ukuphelisa kumabala yellow. Amazinyo akho mhlophe kunokwenzeka ukuba ukusebenzisa ulwazi oluvezwe apha.
iindidi: Lwasekhaya mhlophe Amazinyo tags: Ncuma Bright White, Eqinisekile uncumo lwakho, uncumo, amhlophe mazinyo
Yenza uncumo lwakho dazzle nezi Tips